Home Wararka Ciidamada DF oo howllo Amaansugis ah ka Sameeyey Muqdisho
Ciidamada DF oo howllo Amaansugis ah ka Sameeyey Muqdisho
Xog ayaa lagaa helayaa maanta howlgallo ay xalay ciidamada Booliska Soomaaliya ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir, kaas oo lagu xaqiijinayey ammaanka.
Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa laga sameeyey xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmadaasi, waxaana horkacayey taliyaha saldhigga, Cabdullahi Xasan Cali.
Ujeedka howlgalka ayaa ahaa mid ka dhan ah kooxaha ciyaal weerarada ee inta badan dhibaatooyinka ka geysta gudaha magaalada Muqdisho.
Sida uu sheegay taliyaha baaritaanadan ayaa waxaa lagu soo qab-qabtay tiro dad ah oo u badan dhalinyaro, kuwaas oo la’isugu geeyey hal goob, halkaas oo uu kula hadlay taliyuhu.
Naftaada bad-baadi, annaga na bad-baadi, deegaanka bad-baadi, ha noqon caasi waalideyn intaas ayaa noo ballan ah,” ayuu yiri taliyaha Booliska Warta Nabadda.
Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray in howlgalkan uu qayb ka ahaa ka hortagga kooxaha burcadda ee xilliyada habeenkii ah dhaca u geysta dadka shacabka ah.
Ugu dambeyn wuxuu farriin u diray shacabka ku dhaqan degmada Warta Nabadda ee go wuxuuna ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka Soomaaliya.
Shacabka haddii aysan ciidanka la shaqeyn ma jirto wax nabad ah oo la sugi karo.
Previous articleMadaxweyne Xasan Shiikh “Isbadal ayaan ku samaynayaa Hay’addaha Amniga”
Next articleBoobka Dhulka oo aad uga socda Muqdisho kahor inta aanu XASAN xilka la wareegin
Muqdisho Waxaa Caawa Hardan Iyo Kala jiidasho loogu jiraa Wasaaradaha Muhiimka ah.
Puntland oo xukuno kala duwan ku riday dhalinyaro ka ganacsata mandooriyaha
Heshiis dhex maray Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Odayaasha Beesha Xawaadle